Hillside Batu Retreat @ Kuala Kubu Bharu Heights - I-Airbnb
I-Hillside Batu Retreat itholakala edolobheni elihle lase-Kuala Kubu Bharu. I-villa isegqumeni langasese, lapho ukuphepha nobumfihlo kuqinisekiswa. Iklanywe ngomqondo ovulekile futhi indlu ihlezi egqumeni.Indlu inendawo yokuhlala, amagumbi okulala angu-3 anezikhiya zeminyango, indlu yokugezela engu-2, izindlu zokugezela ezingu-2, ikhishi elifakwe izinto zokupheka kanye netafula lokudlela, indawo ye-barbeque enamathuluzi namalahle, i-balcony. , ne-swimming pool (yabelwe omakhelwane).
Kubo bonke abavakashi besikhathi esizayo! Ake ngiqale isingeniso seyunithi ngendaba encane ngemuva kwaso. Isakhiwo se-villa sakhiwe ngokhonkolo kuphela nesakhiwo sensimbi, yilapho igama elithi 'Batu' lavela khona. Idizayini eyisisekelo yayisuka kubuntu obuyisisekelo, lapho sakha khona indlu yangasese kuphela esetshenziswe 'izimonyo' ezincane kuyo. Yonke ifenisha kanye nemihlobiso yangaphakathi eyunithi yakhethwa ngesandla futhi yayisiko mina nobaba. Isibonelo, izinkuni zetafula lokudlela zatholakala esikhungweni sezinkuni esenziwe kabusha sabe sesilungisa kabusha izinkuni futhi zenze ziphile futhi. Sengiphetha, i-villa yakhiwe ngothando nomjuluko ukuze kuqinisekiswe ukuthi zonke izihambeli zethu zingajabulela okwenziwayo 'Okwakho Kuphela'.
Ukuqinisekisa ukuzizwisa kwe-kick-back-and-relax, silungise nezinto ezimbalwa ongase uzidinge kakhulu: iziphuzo ezilula, amathawula amasha, izinto ezibalulekile zeshawa, nama-adaptha ohambo phakathi kwezinye izinsiza. Sihlale sikulungele ukwamukela izivakashi ngezinkonzo ezingcono kakhulu zokwamukela izihambi, njengoba abanakekeli bekulungele ukusiza.
4.91 · 158 okushiwo abanye
Ukujula kwetshe ukusuka edolobheni elimatasa laseKuala Lumpur, i-Hillside Batu Retreat iyindawo engcono kakhulu yalabo abakhetha ukuhluka kanye nokubukwa kwentaba okuhle kakhulu okunikezwa yi-Batang Kali. Imibono, vele, iyatholakala kusukela kuyunithi, noma ungaphinda ukhethe ukuhlola izindawo ezizungezile ngezinyawo noma ngebhayisikili. Ngenkathi ulapho, ungaphuthelwa ukuvakashela idolobha elithulile eliseduze ne-hillside batu retreat, elinikeza ukudla okuphambili kwendabuko kwasendaweni. Kungakhathaliseki ukuthi uthanda ukudla kwase-Malay, isiShayina, amaNdiya, noma ngisho naseNtshonalanga, idolobha likunikeza konke.
I-Kuala Kubu Bharu iphinde inikeze eminye yemisebenzi ehamba phambili yokuzijabulisa etholakala eMalaysia. Izwa i-Chiling Waterfall, enye yezimpophoma ezihamba phambili e-Malaysia, noma uhlole ukushwibeka kwezintambo okujabulisayo nemigqa ye-zip! Wake wazibuza ukuthi kungaba njani ukundiza njengenyoni? Kukhona nemisebenzi ye-paragliding etholakalayo futhi! Ukuhlehla okumangalisayo ngaphandle nje kwedolobha, i-hillside batu retreat ikunikeza yonke into oyidingayo ukuze uthole ukuhlehla: ukubukwa okuhle, ukudla okuhle, nenala yemisebenzi.
Itholakala ngocingo noma nge-imeyili